Filtrer les éléments par date : vendredi, 31 mai 2019
vendredi, 31 mai 2019 22:34
Fandrobana banky BGFI Toamasina: Maty voatifitry ny Zandary ny jiolahy roa
Nahazo vaovao tamin'ny olona tsara sitrapo ny Zandary fa misy olona mampiahiahy mitondra vola be miriorio tao Ambohitaloha, tanàna any amin'ny 25km miala an'i Toamasina.
Nidina tany ny Zandary ary voamarina fa ireo jiolahy isany nanafika ny banky BGFI Toamasina tamin'ny febroary 2019 ireto. Nisy ny fifandonana, ny alin'ny alakamisy 30 mey 2019 ka tamin'izay no nahalavo ny roa tamin'ireo jiolahy.
vendredi, 31 mai 2019 21:52
Kandida Za Gasy : Nidoboka vonjimaika ao Tsiafahy
Nampidirina am-ponja vonjimaika ao Tsiafahy. Izay no didy savaranonando nivoaka, androany, taorian'ny nanoloran'ny Zandary tamin'ny Fampanoavana eo anivon'ny Fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo ny filoha nasionalin'ny fikambanana Za Gasy, sady kandida tamin'ny fifidianana Depiote farany teo, Ratiharison Jean Navandahy.
vendredi, 31 mai 2019 21:50
Trangam-piainana: Zazavavy 14 taona bevohoka dimy volana narian'ny baban'ny zanany
Avy any Analalava, Faritra Sofia razazavavy no narian'ny baban'ny zanany aty Sambava.
Raha ny filazany dia efa ho iray volana no nialan'izy roa tany Analalava ao amin'ny vohitra atao hoe Befitiana Ambany. Nijanona tao Nosiarina Sambava izy ireo nandritra roa herinandro, ka omaly alakamisy 30 mey 2019 no nanana fikasana ho aty an-drenivohitr'i Sambava izy sy baban'ny zanany ity. Razazavavy aloha no nakana taxi Bajaj dia rangahy manaraka avy aoriana.
Tamin'ny sivy ora maraina no nahatongavany tetsy amin'ny Parcage Antanifotsy, nefa tsy nipoitra ilay lehilahy antsoina hoe Daniel (40 taona) nahabevoka azy sady nitondra azy avy any Analalava.
Ranomaso ny an-dRaherimalala Angela, teraka tamin'ny 06 jona 2005 tao Androhiavy Analalava, tsy mahita izay hitodiana sady mahamay voan'ny tazo.
Efa mandray an-tanana azy ny sampandraharahan'ny mponina aty amin'ny Faritra SAVA.
vendredi, 31 mai 2019 17:04
Analalava: Tsy manaiky ny halabato ny vahoaka
Miakatra ihany koa ny maripana aty amin'ny Distrikan'Analalava, ka hilanjan'ny olona sorabaventy.
vendredi, 31 mai 2019 16:43
Mahabo-Menabe: Mitaraina noho ny hala-bato sy kolikoly ny mpifidy
Nisy solontenan’ny mpifidy tonga teto Morondava, nanao fanambarana tamin’ny haino amanjery mikasika ny zava-nisy nandritra ny fifidianana solombavambahoaka tamin’ny 27 mey 2019 tao amin’ny Distrikan’i Mahabo, Faritra Menabe.
Nitondra porofo, nilazan’izy ireo fa nisy ny hosoka sy hala-bato tao amin’ity Distrika ity, ary efa depiote taloha tao no ao ambadik’izany araka ny filazan’izy ireo hatrany.
Betsaka, hoy ireto solontena ireto, ny olona efa maty nefa mbola nisy nandray ny kara-pifidianany ka nentin’olonkafa nandatsabato miaraka amin’ny « procuration » na fanomezan-dalana.
vendredi, 31 mai 2019 16:41
Ampitatafika-Antanifotsy: Faty telo noloarana avy ao anaty rano
Lehilahy avokoa ireo faty telo. Ny nanaitra dia samy mifatotra ny tongotr’izy ireo tsirairay avy, ary samy nahitana diana fatotra ny tenda.
Tao amin’ny reniranon’i Onive, mandalo eto Ampitatafika, Distrikan’Antanifotsy, Faritra Vakinankaratra no nahitana ny faty androany maraina.
Nakarina an-tanety ary naterina tao amin’ny tranompatin’ny hopitalin’Antanifotsy ny razana miandry ny havany.
Mandeha any amin’ny vono olona niniana natao ny ahiahy. Misokatra ny fanadihadiana hamantarana ny antony sy hikarohana izay tompon’antoka tamin’izao vono olona izao.
vendredi, 31 mai 2019 16:00
Ambositra: Efatra nidoboka am-ponja nanao hosoka tamin’ny fifidianana
Hosoka tamin’ny fifidianana niseho tany amin’ny Kaominina Antoetra – Distrika Ambositra no nisamborana azy ireo. Tany an-tranon'olotsotra no tratra ireo fitanana an-tsoratra tamin’ny fifidianana solombavambahoaka natao tamin’ny alatsinainy 27 mey 2019, miaraka amin’ny vata mangarahara sy fitaovana hafa.
Omaly hariva no niakatra fampanoavana teto amin’ny Fitsarana ambaratonga voalohany Ambositra ny raharaha. Notanana am-ponja vonjimaika ny efatra tamin’ireo voarohirohy, anisany ny tompontrano, mpiray lisitra amina kandida, ary olona roa hafa nahazo fahafahana vonjy maika.
Tomefy olona maro nanoloana ny Lapan’ny Fitsarana omaly nanaraka ity raharaha ity, na dia efa alimbe aza vao nivoaka ny didy savaranonando itazomana am-ponja azy ireo miandry fitsarana.
vendredi, 31 mai 2019 15:49
Morafenobe: Miakatra ny feo amin’ny fisian’ny hosoka tamin’ny fifidianana
Miahiahy ny olona fa niainga tany amin’ny lisi-pifidianana sy kara-pifidianana ny hosoka taty amin’ny Distrikan’i Morafenobe, ka mandiso ny voka-pifidianana.
Miakatra ihany koa ny feo amin’ny fisian’ny hala-bato, ka manao antso avo amin’ireo rafitra mpikirakira fifidianana izy ireo hanokatra fanadihadiana mba ho ny tena safidim-bahoaka tokoa no hivoaka tamin’iny fifidianana solombavambahoaka natao tamin’ny 27 mey 2019 iny.
vendredi, 31 mai 2019 15:48
vendredi, 31 mai 2019 14:21
Disadiam-pifidianana: Hatao « autopsie » ilay tovolahy maty nisy nidaroka raha avy nifidy teny Ambohipotsy
Nindaosin’ny fahafatesana ny harivan’ny alakamisy 30 mey 2019, ilay tovolahy iray niharan’ny herisetra rehefa avy nifidy teny Ambohipotsy – Antananarivo faha-2 ny 27 mey 2019.
Naratra mafy ary tsy nahatsiaro saina izy tonga tao amin’ny HJRA ny harivan’io androm-pifidianana solombavambahoaka io.
Notondroina ho merseneran’ny kandida depiote iray tao amin’ny Boriborintany faharoa nampiasa kara-pifidianana hosoka ity tovolahy ity, ka sendra kandida iray hafa isan’ny mpifaninana tao amin’ity Boriborintany ity, niaraka tamin’ny andian-tanora mpiaradia aminy. Nisy ny fampiasan-kery ka namparatra mafy ilay tovolahy dia izao niafara amin’ny fahafatesana izao.
Atao « autopsie » na fitsirihana izao tolakandro ny faty, hamantarana ny tena antony nitarika izao fahafatesany izao.